Samsung ၏ Galaxy J အကွာအဝေးသည်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုကို ၂၀၁၈ တွင်ပြသလိမ့်မည် Androidsis
နောက်ကင်မရာ ၂ ခုသည်ထုတ်လုပ်သူအများစုတွင်အဖြစ်များလာပြီးတစ်ခုစီသည်မတူညီသောအသုံးပြုမှုများဖြစ်လာသည်။ Huawei လိုထုတ်လုပ်သူအချို့ကအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်ဒုတိယကင်မရာကိုရွေးချယ်ကြပြီးအချို့က LG ကဲ့သို့ဖြစ်သည် သူတို့ကကင်မရာကိုကျယ်ပြန့်တဲ့ထောင့်ပေါင်းထည့်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် Apple က၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်သူများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များက 2x zoom လုပ်ခြင်းအပြင်ဓာတ်ပုံများ၏နောက်ခံများကိုမှုန်ဝါးစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုပေးသောကင်မရာနှစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစည်းရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပြီး၊ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Google က Pixel2XL မှာတွေ့ခဲ့သလိုပဲကင်မရာနှစ်လုံးတပ်စရာမလိုဘူးဆိုတာပြခဲ့တယ်။
#Samsung Galaxy J? (၂၀၁၈) ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း (NB! ယုံကြည်စိတ်ချရသောမျက်မြင်သက်သေအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့သောပုံသည်အနည်းငယ်တိကျမှုမရှိဟုဆိုလိုသည်) pic.twitter.com/OdCVjmHlTa
- စတိဗ်အိပ်ချ် (@OnLeaks) နိုဝင်ဘာလ 20, 2017
ယခုအချိန်တွင် Samsung အတွင်းနှစ်ဆကင်မရာကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်ပထမဆုံး terminal သည်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကမှပြသခဲ့သော Galaxy Note 8 ဖြစ်သည်။ Galaxy S8 သည်နှစ်ရှည်လများစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောကင်မရာနှစ်လုံးမပါဘဲဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည် ယနေ့တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်။ သို့သော်လာမည့်နှစ်တွင် J-range မှစတင်၍ ပြောင်းလဲသွားပုံရသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကကုမ္ပဏီ၏အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ စပိန်တွင်သာမကမော်ဒယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နီးပါးနေရာတိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာ။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအပေါ်မှာအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲ၊ OneLeaks သို့တင်ထားသောပုံကြမ်းများသူတို့နှင့်အတူအချို့သောအကြံအစည်ရှိသည်ကတည်းကတစ် ဦး အချို့သောယုံကြည်စိတ်ချရရှိသည် dual-built-in ကင်မရာပါသည့်ကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယ terminal ဖြစ်သော Galaxy J7 + နောက်ကျောမှာ။ လက်ဗွေဖတ်သည့်ကိရိယာသည်စက်၏ရှေ့တွင်ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ရာယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်မျက်နှာပြင်တိုင်း၏ရှေ့မျက်နှာစာကိုသီးသန့်ထားရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung ၏ Galaxy J range သည်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုကို ၂၀၁၈ တွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်